Lixabiso OEM stainless ukujika iindawo ulwenziwo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Ukulungiswa kwe-Lathe ikakhulu kusetyenziswa isixhobo sokujika ukujika indawo yokusebenza. Uqheliso, i-reamers, i-reamers, iitephu, ukusweleka kunye nezixhobo zokujija zinokusetyenziswa kwi-lathe yokuqhubekeka ngokuhambelanayo. I-lathes isetyenziselwa ubukhulu becala i-shafts shafts, iidiski, imikhono kunye nezinye izinto zokusebenza ezinendawo ezijikelezayo. Zezona ziluhlobo lusetyenziswa kakhulu kumatshini wokulungisa izixhobo kwimizi-mveliso yoomatshini kunye nokulungisa iifektri. I-Ouzhan ibonelela ngeenkonzo ezilungiselelwe wena machining yentsimbi engenasici yajika iinxalenye zabathengi abaxabisekileyo.
I-OEM yentsimbi engenasici yokujika iinxalenye zomatshini
Izinto eziphambili zensimbi engenasici ziyi-carbon, i-chromium, i-nickel, kunye nezinye izinto ezifana ne-molybdenum, ithusi kunye ne-nitrogen. Eyona nto iphambili ekubambeni intsimbi engenasici yiCr (chromium), kwaye kuphela xa umxholo weCr ufikelela kwixabiso elithile, intsimbi inokumelana nokubola. Insimbi engenasici inempawu ezibalaseleyo njengamandla awodwa, ukumelana nokunxiba okuphezulu, ukumelana nokubola kunye nokumelana nerusi Ke ngoko, isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso, oomatshini bokutya, ishishini le-elektroniki, ishishini lezixhobo zasekhaya kunye nokuhombisa ekhaya, ukugqiba ishishini. Ukulungiswa kweLathe yinxalenye yokuqhubekeka ngomatshini.
Inkonzo yeMachining ye-Ouzhan China ye-CNC --- Intsimbi eyenziwe ngokwezifiso ezingenazintsimbi ezijika izinto zokwenza izinto
Egqithileyo Nasekuqiniseni iinxalenye zobhedu
Okulandelayo: Uphose ubhedu